Home Somali News Nigeria: Abubakar Shekau oo beeninyey in Boko Xaram xilkii ka qaaday!
Hogaamiyihii kooxda xagjirka ah ee Boko Xaram ayaa cajalad maqal ah oo uu Axadii shalay soo saaray ku sheegay in uu weli yahay hogaanka kooxdaasi isagoo beeniyey warar sheegaya inuu dhintay.
Abubakar Shekau ayaa sheegay inuu weli nool yahay isagoo sheegay inuu weli hayo xilka hogaaminta kooxdaasi.
Todobaadkii lasoo dhaafay ayey soo baxayeen warar sheegaya in dagaal lagu dilay Abubakar Shekau, sidoo kale Madaxweynaha Chad ayaa saxaafadda u sheegay in hogaamiye cusub uu xilka Boko Xaram la wareegay, kaasi oo codsaday inuu waan waan nabadeed la galo dowlada Nigeria.
Mr.Shekau ayaa isagu noqday hogaamiyaha Boko Xaram, kadib markii uu dhintay ninkii asaasay kooxdaasi oo lagu magacaabi jiray Maxamed Yusuf, kaasi oo ku dhintay xabsiga ciidamada Nigeria. Kadib geerida Maxamed Yusuf ayey kooxda Boko Xaram oo uu hogaanka u qabtay Abubakar Shekau bilaabeen weerarada iyo dagaalka hubeysan oo ay uga soo horjeedaan dowlada Nigeria.